Tsy fandriampahalemana eny Ankaraobato: raim-pianakaviana iray maty voatifitry ny jiolahy | NewsMada
Tao anatin’ny indray alina monja, fanafihan-jiolahy mitam-piadiana roa no indray nitranga, teny Ankaraobato. Raim-pianakaviana iray no namoy ny ainy, vokatr’izany, tao amin’ny fokontanin’ Ifarihy.
Nisesisesy ny fanafihan-jiolahy teny Ankaraobato, omaly. Isan’ny tranga nahafatesan’olona, ilay niseho tao amin’ny fokontanin’Ifarihy, omaly tokony ho tamin’ny 01 ora maraina. Niditra an-keriny tao amin’ireo tompon-trano ireo andian-jiolahy nirongo basy vita gasy iray sy sabatra iray. Nandrahona sy nitaky ny vola 20 tapitrisa Ar tamin’ireo tompon-trano ireo jiolahy tokony ho fito lahy tsy nisaron-tava. Tsy nanana ny vola notadiavin’izy ireo anefa ireo lasibatra ka nanome azy ireo ny vola 3 hettsy Ar sy ireo entany tao an-tranony.
Nandohalika sy nitalaho mafy ihany koa ireo lasibatra mba tsy hamonoan’ireo malaso azy ireo. Nandritra izay anefa, nisy tamin’ireo tompon-trano no tafavoaka tao ivelan’ny trano.
Voasakana avy hatrany izy no mbola nampitahorina tamin’ny basy ihany koa. Taorian’izay, nipoaka ny basy, lavo ny lehilahy. “ Noheveriko fa fampitandremana ilay tifitra nataon’ireo jiolahy azy kay nahafaty ny zokiko mihitsy ilay izy”, hoy ny alahelon’ilay lehilahy niharan’ity fandrobana ity. Taorian’izay, nivadika tao amin’ny tranon’ireo niharam-boina ireo jiolahy nanao arovava orona, mbola nitady ireo vola antapitrisa maro. “Diso adiresy ianareo fa tsy manana izany vola izany izahay”, hoy hatrany ireo tompon-trano. Tsy niala maina anefa ireo tsy matahotody fa mbola naka fahitalavitra, solosaina, finday miisa roa, subwoofer tao amin’ireo tompon-trano.
Efa nanaovan’ny eveka sy ny FJKM ary FFKM antso avo…
Tamin’io andro io ihany, nitrangana fanafihan-jiolahy koa tao amin’ny fokontany Ankadilalampotsy. Araka ny fantatra, tsy nisy entana voaroba tao amin’ireo lasibatra, tsy nisy ihany koa ny aina nafoy. Taorian’ireo fanafihana, tonga teny an-toerana ny polisim-pirenena, tsy tratra intsony kosa ireo olon-dratsy efa tafatsoaka. Misokatra ny fanadihadiana.
Anisan’ny efa nanaovan’ny Fivondronamben’ny eveka (Fem) sy ny FJKM ary ny FFKM antso avo ny hijerena ny lafiny tsy fandriampahalemana manerana ny Nosy.